Ikhaya elipholileyo-Uya kuyithanda le ndawo - I-Airbnb
Ikhaya elipholileyo-Uya kuyithanda le ndawo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJennifer
Ibekwe ngokufanelekileyo ngaphaya kwesitrato ukusuka kwiLincoln Park Ball diamonds & Hamilton Ice Centre, iibhloko ezimbalwa ukusuka kwiSibhedlele soMmandla saseColumbus kunye neFair Oaks Mall, kunye nombindi weendawo zokutyela ezininzi, kunye neminye imisebenzi ukwenza uninzi lokuhlala kwakho. Eli khaya likhululekile kakhulu, kwindawo ekhuselekileyo, kwaye liyamkeleka. Ngena kwelikhaya ndingoyiki ukulibala nto ekhaya. Ekubeni ndingumhambi rhoqo, ndiye ndacinga ngezinto ezininzi oza kuzifuna kude nekhaya lakho.
Uya kuba nalo lonke, ikhaya elinomtsalane elisanda kuhlaziywa kwaye likwindawo entle. Kukho amagumbi okulala ama-2 (igumbi eli-1 elinebhedi yokumkanikazi kunye nelinye linomandlalo ophindwe kabini), isinxibo sedrowa ezi-2, itv, isibane, kunye nendawo yokubeka imithwalo. Amaphepha ongezelelweyo kunye neengubo ziyafumaneka. Kukho ibhafu yobungakanani obu-1 obugcweleyo eneshampoo, isilungisi, ukuhlamba umzimba, isomisi seenwele, iitawuli kunye neempahla zokuvasa, izinto zokuthambisa, kunye nezinye izinto onokuthi uzifune (okanye uzilibele) ngexesha lakho ungekho ekhaya. Kukho igumbi lelanga elinewasha kunye nesomisi esinesixhobo sokuhlambela impahla kunye netafile yasekhitshini enezitulo ezi-4 (kukho izitulo ezisongwayo ezongezelelweyo ukuba ungaphezulu kwesi-4). Kwiintsapho ezihambayo kukho izinto ezifumanekayo kuthi njengeshampu yomntwana, izinto zokosula iintsana, ibhafu yomntwana, izinto zokudlala zokuhlambela, amaqweqwe aphumayo, iincwadi zabantwana, izinto zokudlala, kunye nepakethe-n-play. Ikhitshi igcwele ngokwaneleyo iimbiza, iipani, iitreyi ze-oveni, iziqholo, ioyile, i-blender, i-hand mixer, i-crockpot, isikhululo sekofu, izitya, iiglasi kunye nesilivere. Kukwakho nokutya okomileyo okukhoyo kuwe, kunye nokuthenga igrosari kufutshane (Kroger kunye neWalmart). Ikhaya linobushushu obuphakathi kunye nomoya. Igaraji enye yemoto, i-driveway, kunye nokupaka ezitalatweni. Ubumelwane bukhuselekile kwaye kwindawo enqwenelekayo.
4.94 · Izimvo eziyi-312
Indawo yokuhlala ezolileyo entliziyweni yeColumbus. IColumbus, e-Indiana yaziwa kwihlabathi liphela ngokuqokelela kwayo umsebenzi ngabayili abadumileyo bezakhiwo, abayili bendalo, kunye namagcisa. Ndinikezela ngolwazi oluncinci kwincwadi yam yesikhokelo ukukunceda ucwangcisele ukonwatyiswa nokukhumbula ukuhlala (kwaye ndihlala ndonwabile ukunika iingcebiso ukuba iindwendwe zinqwenela).
Ikhaya linesitshixo saseYale/NEST kucango olungasemva kwaye ikhowudi ekhethekileyo iya kunikwa iindwendwe ngaphambi kokuba zingene ngomyalezo wakwa-Airbnb. Ngeendwendwe ezinekhowudi zokufikelela kwikhaya, zinokufika nangaliphi na ixesha elifanelekileyo. Iindwendwe zingavula ikhaya xa zifika ngaphandle kokudibana nam. Kukho isibane esishukumayo sokubulisa ukuba ufika ngorhatya. Ndihlala eColumbus kwaye ndinosapho edolophini ukuba lufumaneke ukuba luyimfuneko ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa ndiza kunika iindwendwe indawo yazo.
Ikhaya linesitshixo saseYale/NEST kucango olungasemva kwaye ikhowudi ekhethekileyo iya kunikwa iindwendwe ngaphambi kokuba zingene ngomyalezo wakwa-Airbnb. Ngeendwendwe ezinekhowud…